Fikaroham-bahaolana : teren’ny Folalindahy hifandinika maika ny mpanao politika | NewsMada
Fikaroham-bahaolana : teren’ny Folalindahy hifandinika maika ny mpanao politika
Nivoaka amin’ny fanginany ny fianakaviamben’ny Foloalindahy ary hentitra tanteraka tamin’ny fanambarany. “Aoka ianareo mpanao politika voakasika amin’izao raharaham-pirenena izao mba handravona izany ato anatin’ny fotoana fohy”, hoy izy ireo tetsy Ampahibe, omaly. Tsy nanome fe-potoana izy ireo, saingy te hametraka tsy tokony ho ela intsony izany. Manomboka miverina indray izany ny kisary tamin’ny “Raharahan’ny 1991”, naneren’ny Foloalindahy tamin’izany ny mpanao politika, nohidin’izy ireo an-trano teny Andrainarivo ny 31 oktobra, ka tsy nivoaka tao raha tsy nivoaka ny fifanarahan’ny Panorama tamin’izany. Ho tonga amin’izany ity indray mandeha ity raha miainga amin’izao fanambarana izao ?
Etsy andaniny, notsiahivin’ny Foloalindahy koa fa henjehina araka ny lalàna ireo minia manimba sy manapotika ireo toerana saropady ahitana fananam-pirenena na fotodrafitrasa sy fananana iombonana kanefa ambenan’ny miaramila. Nampitandrina koa izy ireo fa hampihatra ny lalàna amin’ireo manao fihantsiana na koa manivaiva ny mpiray tanindrazana sy ny mpitandro filaminana.
Ankoatra izany, navoitran’ny fanambarana ny tsy tokony hanerena mivantana na ankolaka ny olom-pirenena tsirairay amin’ny safidiny. Nitodika amin’ny vahoaka sy ny mpanao politika ireto avy amin’ny fianakaviamben’ny Foloalindahy avy eo. “Aoka tsy hanaiky hatao fitaovana ianareo vahoaka. Ampy izay ny ra latsaka. Aoka tsy hatao sorona noho ny fitiavan-tena, ny fitiavan-tseza, ny fitiavam-bola ny mpiray tanindrazana…”, hoy ny fanambarana.